Ny paozy elektrika dia karazana boribory famonoana herinaratra rotary miaraka amina fiarovana azo antoka mifamatotra amin'ny mekanika famonoana pneumatika.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-16
Ny paozy elektrika dia karazana boribory famonoana herinaratra rotary miaraka amina fiarovana azo antoka mifamatotra amin'ny mekanika famonoana pneumatika. Izy io dia afaka manokatra lavaka 6-100 mm amin'ny fitaovana mafy toy ny beton, biriky, vato, sns. ...
Ny mpanokatra lavaka, fantatra ihany koa amin'ny tsofa loaka na tsofa amin'ny lavaka, dia manondro tsofa boribory manokana ho an'ny lavaka fametahana milina ao amin'ny indostria na injeniera maoderina.
Ny mpanokatra lavaka, fantatra ihany koa amin'ny tsofa loaka na tsofa amin'ny lavaka, dia manondro tsofa boribory manokana ho an'ny lavaka fametahana milina ao amin'ny indostria na injeniera maoderina. Mora ny miasa, mety entina, azo antoka ary be mpampiasa. It ...